Posted by ကို Tranquillus | ဇန်နဝါရီ 13, 2018 | ရုံး
သငျသညျနာရီဖန်တီးခြင်းနှင့်ဖြည့်ဆည်းဖြုန်း သင့်ရဲ့ဖိုင်များကို Excel ကို? ဒါဟာအမှန်တကယ်ပဟေဠိရဲ့နှင့်သင်ဒီဆော့ဗ်ဝဲကကမ်းလှမ်းကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်နိုင်ခြေရှင်းလင်းဖို့အချိန်ယူဘယ်တော့မှပြီလော
သငျသညျ features အသစ်တွေကိုသင်ယူ, အခြေခံပြန်လည်သုံးသပ်သို့မဟုတ်သင့်အသိပညာတိုးတက်စေရန်ချင်ဖွစျစေ, မပါထပ်မံကြည့်ရှုနှင့်ဤဗီဒီယိုများလယ်ပြင်၌တစ်ဦးမာစတာဖြစ်လာမှကြည့်ပါ။
ဒီ Excel ကိုလေ့ကျင့်သင်တန်းတွင်သင်အမျိုးမျိုးသောလဲ tutorial တိုနှင့်လိုရင်းတိုပုံစံ (2 11 မိမိ) ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ဤအဗီဒီယိုများနှင့်အတူ, သငျသညျ Excel ကိုနှင့်အတူသင်၏အသက်တာပိုမိုလွယ်ကူစေရန်နေ့တိုင်းသင်ကူညီဖို့အားလုံးကိုလှည့်ကွက်လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဤလေ့ကျင့်မှု၏သော့ချက်စကားလုံးများ - အချိန်ကိုသက်သာစေခြင်း၊ စွမ်းဆောင်ရည်အသစ်များနှင့်သင်အလုပ်တွင်ထိရောက်မှုရှိရန်အသစ်သောအင်္ဂါရပ်များလေ့လာခြင်း။
ဤ Excel လေ့ကျင့်ရေးတွင်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်မတူညီသောသင်ခန်းစာအမျိုးအစားများကိုဤတွင်ဖော်ပြထားသည်။
- တဦးတည်းကလစ်၌သင်တို့၏စားပွဲ Turn
- Copy ကူးတကလစ် data နဲ့ဖော်မြူလာ
- နေရာလေးကို keyboard shortcuts တွေကို၏အရှင်ဘုရား
- ရှာဖွေရန်နှင့် clipboard ထံသုံးစွဲဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူ
- ဘာလို့လဲဆိုတော့ Micro စနစ်နဲ့အခြားသောလောကီသားတို့သည်အတွက်ကိုယ့်ကိုကိုယ်ခွငျးမှာအာရုံစှဲနဲ့အသုံးပြုနိုင်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူ
- သင့်ရဲ့ဒေတာ entry ကို Check
- အစာရှောင်ခြင်း access ကိုများအတွက် toolbar ကိုကျွမ်းကျင်
ကြိုးစားအားထုတ်မှုလျော့နည်းစေကြောင်းအတိုမှာတော့ 23 အကြံပေးချက်များဗီဒီယိုများနှင့်အရင်းအမြစ်များ!
Excel: နေဆဲကော်လံခေါင်းစီးမြင်နိုင် #06 လိုပါတယ်
Excel: တစ်ဦးကဆဲလ်အများအပြားလိုင်းပေါ်တွင် TEXT ရေးပါ #28
Excel: တစ်ဦးကိုနှိပျ (လိုင်းများ / ကော်လံ) ကို AT သင့်စားပွဲလှည့် #21
Excel: THE Brush and save တွင် TIME #16 အသုံးပြုနည်းလေ့လာရန်
Excel: ပျောက်ကွယ်သွားကြောင်းကိုသင်၏ Band FIND! #03
Excel: one click အချက်အလက်များထဲ၌ Copy ကူးနှင့်ပုံစံများချ #29
Excel:7အလွယ်သုံးကီးဘုတ်တကယ်လက်တွေ့ကျတဲ့ #34
Excel: တစ်ခုသို့မဟုတ်ထို့ထက်ပိုဆဲလ်အကြောင်းအရာ Hide #36
Excel: အထပ်ထပ်ပြီးရှုပ်ထွေးတဲ့ဖမ်းဆီးရမိအဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်ဘယ်လိုခွဲခြားမလဲ #37
Excel: အသုံးပြုချုံ့ချဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှု #39
Excel: သင် #26 ချင်တဲ့နှိအဖြစ်အများအပြားကြိုးကို INSERT
Excel: အကြံပြုချက်: #40 "Save As ကို" တစျနှိပျ
Excel: Excel #42 IN ဒီတွက်ချက်မှုကို utility ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိ
Excel: သင့်ကော်လံနောက်ထပ် WIDTH ပြဿနာသလား #14
Excel: THE Toolbar QUICK #44 သိအသုံးပြုမှု
Excel ကိုသင့်ရဲ့ Productivity သိကောင်းစရာများအပိုင်း-တိုးမြှင် ဇူလိုင်လ 14th, 2018Tranquillus
အောက်ပါသာ. ကောင်း၏သင့်ရည်မှန်းချက်များရောက်ရန်အဆင့် မှစ. ကိုယ်တော်၏အောင်မြင်မှုအရှိန်အဟုန်မြှင်။